Etu Ndị Igbo Si Egbu, Kee Anụ Okụkọ N’ezinaụlọ - Igbo News | News in Igbo Language
May 30, 2021 - 14:54
Chinwendu Uzoatu na Izunna Okafor
Otu n’ime njirimara ndị Igbo bụ irikọ nri ọnụ. Onye o dịịrị ịhu na e siri nri ma kekwaa ya bụ nne. Ihe kpataara e ji erịkọ nrị ọnụ bu iji gosi na ha niile bụ ụmụnne na onweghi onye na-asọ ibe ya asọ. Ọzọ dị ka ibe ya bụ nne ọbụla maara ole nri onye ọbula nọ n’ezinaụlọ ya ga-ericha.
Mgbe ọbụla e nwere nnukwu mmemme a na-eme n’obodo, dika iri ji ọhụrụ, ịgba ofala w.d.g ezinaụlọ dị iche iche na-egbu ọkụkọ. Mgbe ọbụla e gburu ọkụkọ, onye ọbụla nwere oke nke ya, bido na nna nke bụ isi ezinaụlọ ruo n’obere.
O bụ nna maọbụ diokpara, ma ọ bụrụ na nna anoghịzị ya na-ata eko ọkụkọ na obi ya. Eko ọkụkọ na obi ya na-egosị ndụ n’uju ya. Ọ bụ n’ihi nke a ka o jiri bụrụ onyeisi ezinaụlọ ga-ata ya iji gosi ọrụ ya dikaonye nọ n’isi. Nke a na eziputakwa na ọ bụ ya ka ọ dịịri ichekwa ndu ndị ezinaụlọ ya.
Ihe onye nne na-ekete n’okụkọ bụ olu ya. Nke a na-egosiputa ọrụ ya na ike o nwere dika onye nne n’ezinaụlọ. Ọ bụ olu okụkọ na-eme ka ọkụkọ tugharia isi ya were lee anya ebe ọ chọrọ ile anya ma mekwaa ihe ọ chọrọ ime. Dika onye nne, ọ bu ya na-ejikọ ezinaụlọ ya ọnụ ma mee ka ihe na-aga dịka o kwesịrị.
Ọ bụ nne na ejikọ nna na ụmụ a mụtara n’ezinaụlọ. Onye na-ata ngụgụ ọkụkọ na ukwu ya bu ada. Ihe mere ada ji ata ngugu na ukwu ọkụkụ bụ n’ihi nkwenye ndị Igbo nwere na ọ bụrụ na ada ruo ihe e ji nwaanyị eme na ọ ga-efepụ lụọ di n’ezinaụlọ ọzọ; n’ihi na ọ bụ ngụgụ ọkụkọ ka o ji efe efe. Nke ọzọ bụrụ na site n’inye ada ukwu ọkụkọ ndị ezinaụlọ ya na-agọrọ ya ọfọ omụmụ ma ọ lụọ di.
Ndị na-ata isi na ụkwụ ọkụkọ bụ ụmụnwoke na-etolite etolite n’ezinaụlọ. Site n’inye ha isi ọkụkụ a na-echetara ha na ọ bụ ha ga-abụ ndịịsi ezinaụlọ ahụ n’ọdịnihu. Sitekwa n’ita ukwụ ọkụkọ a na-echetakwara ha na ọ bụ n’aka ha ka nkwụdosike ezinaulọ di; ka ha site n’ịgba mbọ mee ka ezinaụlọ ha kwụdosie ike, ghara ilaghachi azu.
Ihe mmụta: Nri bụ oriko n’ala igbo. Otu ndị Igbo si eke anụ akụkọ n’ezinaụlọ ha na-egosi na onye ọbụla nwere ọrụ dịịrị ya